Dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku sameyneysa cildii soo wajahday diyaaradii Madaxweynaha la socday | warsugansomaliya.wordpress.com
Dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku sameyneysa cildii soo wajahday diyaaradii Madaxweynaha la socday
Dowladda Soomaaliya ayaa baaritaan rasmi ah ku sameyneysa waxyaabihii sababay ciladii soo wajahday diyaaradii Madaxweynaha iyo wafdigii uu hogaaminayay saakay ka qaaday garoonka diyaaradaha Muqdisho, balse nus saac kadib ay deg deg dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayaan wararka diyaaradan ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo la sheegay in saraakiisha ammaanka dowladda ay amreen in diyaarada ay ku hakato garoonka oo aanay ka duuli karin si KMG ah.
Hey’addaha ammaanka dowladda ayaa laga soo xigtay in muddo 48-saac ay warbixin ku keeni doonaan waxyaabaha keenay in diyaarada cilad soo wajahdo, iyadoo hawada ku jirtay, mid ka mid ah matooradeeda ay shaqeyn waayeen.
Diyaarada ayaa soo degtay, iyadoo dhinac ka qiiceysa, inkastoo wadayaasha diyaarada ay muujiyeen degenaan la xiriira habka ay u maareeyeen markii ay cilada arkeen, kadibna si deg deg ah ugu soo celiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Warar soo baxayay ayaa sheegaya in diyaaradan ay saakay ka soo kacday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay durba keentay shaki xoog leh.
Arrintan ayaa waxay su’aal gelineysa amniga diyaaradaha ee Madaxda Soomaalida, iyadoo diyaaradaha heerkooda hooseeya ee ay kireystaan madaxdana aanay aheyn kuwo lagu kalsoonaan karo.
← Hoggaanka sare ee Al-shabaab:- Shalay iyo Maanta. (Warbixin Xiisa badan oo meela badan taabanaysa).
Waxaa caawa si guud looga wada soomayaa wadamada islaamka iyo caalamka oo dhan. →